प्रेम विवाह भएको ४ महिनामै १६ बर्षिय युवतीलाई श्रीमानको निर्मम कु’टपि’ट, ३ महिने सुइ लगाएर यस्तो अ’त्याचार गरेको युवतीको मिडियामा खुलासा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 1, 2021 July 1, 2021 AdminLeaveaComment on प्रेम विवाह भएको ४ महिनामै १६ बर्षिय युवतीलाई श्रीमानको निर्मम कु’टपि’ट, ३ महिने सुइ लगाएर यस्तो अ’त्याचार गरेको युवतीको मिडियामा खुलासा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौ । नेपालमा सबैले दा’इजो प्र’था अन्त्य भयो भन्छन तर अझै पनि ग्रामिण र सहरी क्षेत्रमा यस्ले भित्रभित्रै आफनो एउटा अस्तित्व बनाएको छ र शैलीमा मात्र परिबर्तन आएको छ भन्दा फरक पर्देन । अहिले माग्ने तरिका मात्र फरक भएको बताउछन केही मानिसहरु भने कसैले त यहि दाइजोको निहुमा अ.पराधिक कार्य समेत गरेका घ’टनाहरु सुन्न र देख्न पाईन्छ ।
आज हामीले पनि दोलखाको यस्तै घ’टना लिएर आएका छौ जहा १६ बर्षकै कलिलो उमेरमा प्रेम बिहे गर्दा, बिहे भएकै ४ महिनामा नै यसरी श्रीमानले म.रणासन्न हुनेगरी कु.टेर यस्तो अवस्था बनाएका छन श्रीमतीको । प्रेम बिबाह गरेको यो जोडीको बिहेमा फाटो तब आयो जब यिनका श्रीमानले श्रीमती नबिना खडकास“ग दाइजोको निहुमा दिनरात कुटपिट गर्न थाले ।
अहिले त यस्तो अवस्था समेत बनाए श्रीमानले कु.टेर, हात भा’च्दिए र साथमा शरीर भरि नि’लडा’म अनि पेटमा ला’त हान्दा पेटबाट पनि हल्का र’गत बगिरहेको बताउछिन उनकी दिदी सबिना खडका । र अब न्याय दिलाउन जुन सुकै प्रयास गर्ने र श्रीमानसँग छुट्टाएर राख्ने बताउँछिन् माइती परिबार । उनीसंग गरिएको कुराकानी यहाँबाट हेर्नुहोस:
‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–३’ को तेस्रो एपिसोड ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)